Shina Inona no tombony azo amin'ny loharano jiro LED? orinasa sy mpanamboatra | REIDZ
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny loharano jiro LED?
Amin'ny maha-taranaka loharanom-baovao vaovao farany, ny loharano jiro LED point dia manangana loharano maivana mangatsiaka LED, izay afaka mamoaka loko isan-karazany araky ny filàna; mandritra izany fotoana izany, dia azo atao ihany koa ny manangana chip-microcomputer, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fandaharana, mba hahatratrarana vokatra feno toy ny gradient miloko, mitsambikina, manodinkodina, ary rano; koa Ny fisintonana ny efijery fampiasa manokana dia azo soloina ny fampirantiana sy endrika endrika marika loharanon'aina marobe marobe, ary ny modely isan-karazany, lahatsoratra sy sary mihetsika, vokatry ny horonantsary sns ... dia azo ovaina; loharanom-baovao maivana dia ampiasaina betsaka amin'ny tetikasa jiro eny ivelany.
Ny loharano jiro LED dia samy hafa be noho ny tara-pahazavana nentim-paharazana mahazatra sy ny famoahan-jiro maivana (toy ny jiro marevaka, jiro sodium avo lenta).
Ny loharanom-pahazavana LED amin'izao fotoana izao dia manana tombony manaraka amin'ny jiro:
1. ny seismika tsara sy ny fanoherana fiantraikany
Ny rafitry ny loharanon'ny jiro LED point dia ny mametraka ny fitaovana semiconductor electroluminescent eo amin'ny rindran-tsary, ary avy eo dia asio tombo-kase koa izy miaraka amin'ny epôxy resin. Tsy misy akorandriaka vera amin'io firafitra io. Tsy ilaina ny manala vay na mameno entona miavaka ao anaty fantsana toy ny jiro miabo sy fluorescent. Noho izany, ny loharano jiro LED dia manana hery fanoherana tsara sy fanoherana fiantraikany, izay mitondra finiavana amin'ny famokarana, fitaterana ary fampiasana ny loharanon-jiro LED.
2. azo antoka sy maharitra
Ny loharano jiro LED dia azo aroso amin'ny alàlan'ny DC ambany. Eo ambanin'ny toe-javatra mahazatra, ny volavolan'ny herinaratra mamatsy herinaratra dia eo anelanelan'ny 6 ka hatramin'ny 24 volts ary ny asa fampiasa amin'ny fiarovana dia tsara kokoa. Izy io dia mety indrindra amin'ny fampiasana amin'ny toerana ho an'ny daholobe. Ankoatr'izay, ao amin'ny tontolo ivelany tsara kokoa, ny loharanom-pahazavana dia tsy dia misy hazavana kely kokoa noho ny loharanom-pahazavana nentim-paharazana ary manana fiainana lava ela. Na dia mihodina sy mivadika matetika aza, dia tsy hisy fiantraikany ny androm-piainany.
3. fampisehoana tontolo iainana tsara
Satria ny loharano jiro LED dia tsy manampy rakitra vy mandritra ny dingana famokarana, tsy hiteraka fandotoana mercury rehefa avy nariana izy io, ary ny fako dia azo ahodinina, manangona loharano ary miaro ny tontolo iainana.
4. fotoana famaliana haingana
Ny fotoana famaliana ny jiro incandescent dia milliseconds, ary ny fotoana famaliana ny jiro dia nanoseconds. Noho izany, dia niely be eo an-tsaha io fiara jiro sy fanilo fiara io.
5. fanitsiana mazava tsara
Araka ny fitsipiky ny loharanon'ny jiro LED point, ny hazavana marevaka na ny tselatra famoahana dia miova tanteraka amin'ny fototry ny ankehitriny. Ny asany ankehitriny dia mety ho lehibe na kely ao anatin'ny laharam-pamantarana, ary manana fanitsiana tsara, izay mametraka ny fototry ny fahatsapana ny jiro fahafaham-po amin'ny mpampiasa sy ny hazavana tsy mihetsika amin'ny fanaraha-maso ny jiro LED.